Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.4 Research paikady
Raha jerena ireo toetra folo ny tahirin-kevitra lehibe loharanom-baovao sy ny raiki-tampisaka fetra ny tahirin-kevitra na dia nahita tsara, inona no karazana fikarohana tetika no ilaina? Izany hoe, ahoana no ianarantsika rehefa tsy manontany fanontaniana ary aza mihazakazaka fanandramana? Mety Toa mijery fotsiny ny olona fa tsy afaka hitarika ny mahaliana fikarohana, fa tsy ny raharaha.
Hitako telo lehibe tetikady ho an'ny fianarana avy observational angona: Ny fisiana ara-zavatra, forecasting zavatra, ary approximating fanandramana. Aho hamaritra tsirairay ireo-izay fomba azo antsoina hoe "fikarohana tetika" na "fikarohana fomba fanamboarana" -ary aho ohatra ohatra azy. Ireo paikady manokana dia sady tsy mifanohitra izy na feno nataonay, fa izy ireo no hisambotra be dia be ny fikarohana amin'ny observational angon-drakitra.
Mba hanambara ilay filazana manaraka, raha nandinidinika ny zavatra no zava-dehibe indrindra rehefa misy empirically adjudicating eo faminaniana avy amin'ny teoria. Forecasting, ary indrindra fa nowcasting, dia mety ho ilaina ho an'ny mpanao politika. Farany, angon-drakitra lehibe mampitombo ny fahafahantsika manao causal observational vinavina avy amin'ny angon-drakitra.